Unodzivirira internet Laser kucheka MACHINE KANA-P - China Shandong Oree Laser
Unodzivirira internet Laser nokuveza muchina adopts zvakazara akanyudzwa Laser unodzivirira butiro, vakakanda mubhedha simbi, chain Exchange chikuva uye nyanzvi CNC nokuveza hurongwa kupa vanoshandisa vane simba nokuveza mano uye kunyatsoshanda. Panguva iyoyowo, kumusoro kwenyika zvikamu uye kunyatsoomerera gungano rikurumidze nechokwadi muchina yakachengeteka, vakarongeka uye mukuru-zvakarurama yakagadzikana oparesheni.
1.A kugwinha nemishonga gantry Style Laser avakirwa maindasitiri kushandiswa;
2.A yakakwirira waivako Laser pasuru vachiwirirana ane akagunzva chidzitiro kudzora kusika kwete chete; boka nyika Laser cnc asiwo chidimbu Ndimi;
3.Automatic kukwirira kuchinja kunoita musimboti wokuzadzika kureba chenguva kuona unhu zvabuda;
4.The WiFi akashongedzerwa kubvumira muchina kuti kuvhurwa paIndaneti uye rinobvumira kure kuona;
5.Adopt Japan Yaskawa servo injini, High nemazvo imupota pani;
6.Laser zvirimowo mukati internet optic wire (hapana nezvionioni kuchinja);
7.10x duku gwapa hukuru pane 10.6um CO2 mhando lasers;
8.Solid mamiriro Laser rinovapo pamusoro 50,000hrs;
9.Various simba nzira kubva 500W kuna 3kW (default 500W);
10.Optional zvizere yakakomberedzwa kana akazaruka-pamubhedha magadzirirwo.
A cabinet runoparadzanisa zvemagetsi simba kupinda siyana mabasa uye rakatangwa ne nematunhu akasiyana inonzi simba kugovera cabinet. Kazhinji vachaonekwa nesimba kugovera cabinet hurongwa. The chikuru kushanda yakazvimirira yemagetsi kudzora cabinet Magadzirirwo kudzora kutanga uye kumisa pamusoro injini. Uyezve, unogona kudzora chinzvimbo uye kumhanya kumhanya injini. Kana injini rapera, zviri nyore chaizvo uye nokukurumidza kuita mhosva kuonekwa uye mhosva kuongorora chirwere. Chii zvakawanda, zvose zvemagetsi zvinoriumba uye lasers Makavakwa kupinda yakazvimirira kudzora cabinet guruva-uchapupu magadzirirwo kuvandudza upenyu magetsi zvinoriumba.
Pepeat Repositioning Kutaura ± 0.03mm ± 0.03mm ± 0.03mm
Maximum Speed 120m / Maminitsi 120m / Maminitsi 120m / Maminitsi
Working Table chipande tafura chipande tafura chipande tafura
Maximum Yechipiri 1.5G 1.5G 1.5G
Previous: Tube internet Laser kucheka MACHINE OR-T
Next: Laser achiita zvokutemera MACHINE OC
mhando KANA-P 1530 KANA-P 2040 KANA-P 2060
Dimensions (L * W * H) 9950 * 3050 * 2100mm 11000 * 3600 * 2100mm 13600 * 3600 * 2100mm
uremu 8000kg 10000kg 11500kg
Max. Movement Speed 170m / Maminitsi
Max. nokuveza Speed 80m / Maminitsi
Max Yechipiri 1.5G
Acrylic Laser Kucheka Machine
Acrylic Laser Kucheka Machines
Chiwanikwa Laser Cutter
Chiwanikwa Laser Kucheka Machine
Chiwanikwa Steel Fiber Laser Cutter Machine
Chiwanikwa Steel Sheet Laser Cutting
Aluminum Fiber Laser Kucheka Machine
aluminum Laser Kucheka Machine
cNC Laser achicheka Steel Machine
Iron Fiber Laser Kucheka Machine
Iron Laser Kucheka Machine
Metel Laser Kucheka Machine
Nyoro Steel Fiber Laser Cutter
Nyoro Steel Fiber Laser Cutting Machine
Nyoro Steel Laser Cutting Machine
Stainless Steel Fiber Laser Kucheka Machine